ငါ StumbleUpon နှင့်ချစ်တယ် | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, အောက်တိုဘာလ 25, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါမျှဝေမှုကိုကြိုက်တယ်။ ဒီတော့ဒီမှာဘလော့ဂ်ကိုသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုရည်ညွှန်းတဲ့အပိုင်းတွေ။ သင်သတိပြုမိသောအရာများအနက်တစ်ခုမှာ StumbleUpon အစာရှောင်ခြင်းသည်ငါ့ site အတွက်ကြီးစွာသောလွှဲပြောင်းအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာနေသည်။ ထို hits များ၏အရေအတွက်နှင့်အရည်အသွေးသည်အလွန်ထူးခြားသည်။ visitors ည့်သည်အများစုသည်စာမျက်နှာတစ်ခုထက်မကလှည့်ပတ်နေသည်ကိုသင်သတိပြုပါ။
StumbleUpon သည်ဆိုဒ်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်ရိုးရှင်းစေသည်။ ကျွန်ုပ်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ရှိသောစာမျက်နှာများသို့ကျွန်ုပ်ကိုပို့ပေးသည်၊ ကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းရှိမရှိဖော်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်၊ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ထားသည့်စာမျက်နှာများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ခွင့်ပြုပြီးအခြားသူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုထားသော Firefox ရှိ StumbleUpon toolbar ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုပါသည်။ ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုပါ။ ဝိုး!
ဖြစ်ချင်တော့, သင်သည်သူတို့ site ကိုလှည့်ပတ် 'ထိမိ။ လဲ' ရန်ရှိသည်။ site ကိုမြေပုံထုတ်ရန်ကူညီရန် Usability Engineer လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်ထံပို့ဆောင်ပေးသော the ည့်သည်များသာမကကြီးမားသောကွန်ယက်နှင့်မှတ်သားထားသည့်လက္ခဏာများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသည်။ ငါသည်လည်းသူတို့အမျိုးအစားများကိုချဲ့ထွင်ရန်ဆက်လက်မျှော်လင့်ပါတယ်။ သူတို့ကနည်းနည်းပိုကောင်းတယ် diggဒါပေမယ့်အပိုင်းနေဆဲခက်ခဲတဲ့။
အလည်အပတ် အကြှနျုပျ၏ StumbleUpon စာမျက်နှာ။ ဒီနေ့ငါဒီမယုံနိုင်လောက်အောင်ဆိုဒ်ကို 'ထိမိလဲ' ကြောင်းတွေ့လိမ့်မယ် ဘီလီဟာဗေး။ Flash အလုပ်လုပ်သည်၊ site ရှိသွားလာလှုပ်ရှားမှု၊ သင်သွားလာသည့်အခါဂီတ၏တည်နေရာပြောင်းလဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ... ။ ဝိုး။ အလွန်မယုံနိုင်လောက်အောင် site! ဂီတကိုသင်မကြိုက်ကောင်းနှစ်သက်ကောင်းနှစ်သက်လိမ့်မည်။ ငါ site ကိုမှကွောကျရှံ့မိပါတယ်။
26:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 1, 08
ကျွန်ုပ်၏ ပို့စ်များထဲမှ တစ်ခုမှာ ခဏအကြာတွင် ထိတ်လန့်သွားသည် - ကျွန်တော် 70-80 ထိ ထိသွားသည် ထင်ပါသည်။ အရသာကို စွဲလမ်းလွန်းပေမယ့် 😛
26:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 7, 02
ရယ်စရာကောင်းတာက - မနေ့ညက ကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်စာရင်းတွေကို စစ်ဆေးကြည့်တော့ Stumbleupon က ကျွန်မကို ဧည့်သည်အသစ် 30 ယောက် ပို့ခဲ့တာကို သတိထားမိတယ်။ ကျွန်ုပ်အတွက်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်၏ တစ်နေ့တာ သွားလာမှု၏ 80% ကို ကိုယ်စားပြုသည် - နှင့် Stumbleupon အကြောင်းကို အရင်က တစ်ခါမှ မကြားဖူးခဲ့ပါဘူး... မင်းက ငါ့ကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားလို့လဲ။ Doug၊ မင်းလုပ်သမျှအတွက် မင်းကို ကျေးဇူးတင်လို့ မရဘူး။ ဆက်လုပ်ပါ!! ချက်လက်မှတ်က မေးလ်ထဲမှာ (ဟီးဟီး)။
သြဂုတ်လ 16 ရက် 2008 ခုနှစ် 4:40 နာရီ
ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်။ အခုလိုရေးပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။